Banyere Anyị - Kingsign acryli
Oké acryli mpempe akwụkwọ
Agba acryli mpempe akwụkwọ
Frosted acryli mpempe akwụkwọ
Sanitary acryli mpempe akwụkwọ
Anti-ntigbaa acryli mpempe akwụkwọ
Anti-ọkọ acryli mpempe akwụkwọ
Anti-Static acryli mpempe akwụkwọ
Fireproof acryli mpempe akwụkwọ
Diffuser acryli mpempe akwụkwọ
Ewute acryli mpempe akwụkwọ
Marble acryli mpempe akwụkwọ
Ụkpụrụ acryli mpempe akwụkwọ
Pearl acryli mpempe akwụkwọ
Wood ọka acryli mpempe akwụkwọ
Clear acryli tube
Agba acryli tube
Diffuser acryli tube
Large acryli tube
Light Guide acryli tube
Clear acryli Rod
Agba acryli Rod
Acryli afụ Rod
Light Guide acryli Rod
Ụkpụrụ acryli Rod
Kpara akpa acryli Rod
igba mpempe akwụkwọ omumuihe
extrusion mpempe akwụkwọ omumuihe
Art & Nka
Ngwá ụlọ & naa
Ọkụ & Ịchọ Mma
The ụlọ ọrụ ka ẹkenam ụwa na-eduga akpaka mgbatị na extrusion acrylic mmepụta akara na British "British Pilkington Glass" iko ebu. Kingsign nwere a akụkọ ihe mere eme nke afọ 15 na ubi nke acrylic, ma e dabere na elu-ọgwụgwụ mgbatị board mmepụta na-onwem na elu Taiwan mmepụta akara. Ọ adopts na Emmanuel monomer nyere site mba a ma ama na ụlọ ọrụ na na-polymerized site elu-okpomọkụ mgbatị usoro. Na ezi aha, ọ na-arụ a elu aha na njem. The ụlọ ọrụ a na-achụ ọhụrụ na-aga n'ihu mma.
Na 2016, Kingsign acryli ẹkenam anọ dị elu-ọgwụgwụ extrusion board mmepụta edoghi (abụọ elu Italian mmepụta edoghi na abụọ dị Toshiba mmepụta edoghi), na onwe ha mepụtara na-emepụta anụ ụlọ elu-ọgwụgwụ extrusion efere. Mmepụta nke extrusion efere adopts PMMA pellets nyere site mba a ma ama na ụlọ ọrụ. The ngwaahịa dabeere na ahịa ina nke elu-edu acrylic ìhè ndu efere na obodo na ná mba ọzọ. Na aha ọma na nso ahịa ahịa ọrụ usoro, ụlọ ọrụ na-arụ a elu aha na ubi nke acrylic ìhè ndu efere. Anyị na ngwaahịa na-enwe ezi ahịa na a elu larịị nke ika aha, na-kwadoro site ahịa na obodo na mba ọzọ, na exported na Europe, America, Southeast Asia na n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa. Na ndabere nke anụ àgwà na elu arụmọrụ, Kingsign acryli mpempe akwụkwọ nwere obi ụtọ a ọma ahịa ruo ọtụtụ afọ.
Kingsign acryli bụ ọkachamara ụlọ ọrụ ọkachamara na imewe na ọrịre nke acrylic Ibé akwụkwọ, akpa na mkpara. The factory kpaliri site Shanghai Anting Industrial Park ka Jiangsu Province. The factory-ekpuchi ebe ndị 60,000 square mita na nwere kwa afọ mmepụta ike nke 20,000 tọn. Anyị ike ụlọ ọrụ na Hong Kong, Shanghai, na United States, na Shanghai nwere itieutom na-elekọta nke zuru ụwa ọnụ ahịa na ahịa;
Dị ka mgbe niile, Kingsign acrylic ga-anọgide na-eme ihe ruo azụmahịa ụkpụrụ nke ụlọ ọrụ "Quality Abịa mbụ, Ahịa bụ Uppermost", anyị na-agba mbọ iji na-arụkọ ọrụ ji obi, Nlụpụta nlezianya, melite na-na ọkụ ọhụrụ ụzọ ụkwụ mgbe niile.
Large acryli tube, Solid Clear acryli Rod, Black Acrylic Rod, Plastic Now tube , Clear Now acryli Rod, acryli Guide mkpara ,